पेङ्ग्वीनको बोल्ने शैली मान्छे जस्तै ! - Birgunj Sanjalपेङ्ग्वीनको बोल्ने शैली मान्छे जस्तै ! - Birgunj Sanjalपेङ्ग्वीनको बोल्ने शैली मान्छे जस्तै ! - Birgunj Sanjal
पेङ्ग्वीनको बोल्ने शैली मान्छे जस्तै !
२४ माघ २०७६, शुक्रबार ११:११
एजेन्सी । इटलीस्थित अनुसन्धानकर्ताहरुको टोलीले पेङ्ग्वीन चराले एकआपसमा कुरा गर्दा मान्छे जस्तै शैली अपनाउने गरेको प्रमाण फेला पारेका छन् । यो भन्दा अगाडि वनमान्छेको मात्र हामीले जस्तो बोल्ने शैली भएको विश्वास गरिएको थियो । सो टोलीले पेङ्ग्वीनहरुले विपरित लिङ्गलाई आकर्षित गर्दा निकाल्ने ५९० आवाजहरु रेकर्ड गरि अध्ययन गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
यसमा इटलीको चिडियाखानामा तीन भिन्दाभिन्दै कोलोनीमा राखिएका पेङ्ग्वीनहरुको जाँच गरिएको थियो । यसरी उनीहरुले निकाल्ने आवाज गधा र घोडाजस्तै भएको र मानछेको भाषा जस्तै बोल्ने शैली अपनाउने गरेको रिपोर्टमा प्रकाशित छ ।
पेङ्ग्वीनले विशेषगरी तीन किसिमका आवाज प्रयोग गर्ने गरेको पत्ता लागेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दहरु छोटो हुने गरेको पाइएको छ भने लामा कुराकानीमा पनि छोटा शब्दको बढी प्रयोग गर्ने गरिएको उनीरुले बताए । जर्नल बायोलोजी लेटर्समा प्रकाशित सो अध्ययन पेङ्ग्वीन र मान्छे बीचको समान व्यवहार पुष्टि गर्ने पहिलो अनुसन्धान भने होइन ।
यसअघि पेङ्ग्वीनहरुमा समलिङ्गी व्यवहारको पहिचान गरिएको थियो जसबारे विश्वव्यापी चर्चा भएको थियो । उक्त क्षमता पहिलोपटक पत्ता लाग्दा विश्वभरका वैज्ञानिकहरु आश्चर्यमा परेका थिए । Baahrakhari